Teff - A Gluten-free Dheemaan oo dhan
Cuntada American Astaamaha Cunnada Maraykanka Cuntada iyo Vegan Cuntada Cunto-bilaash ah Nafaqada Cunto-bilaashka ah
Ka fikirida tefka Akhri faahfaahin dhan tifaftirka maqaarka oo dhan, oo ay ku jiraan meesha laga helo, sida loo kariyo, iyo sidoo kale cunto yar oo tareen ah.
Waa maxay teffbs?
Teff waa miraha oo dhan , oo la mid ah miro kale oo la yaqaan oo dhan sida ari, galley, iyo quinoa . Waxaa dhawaan la helay caan ka mid ah ciddii kale ee caanka ah ee loo yaqaan "grain ancient" sida freekeh iyo quinoa. Si ka duwan sida badarka oo dhan, teff waa maqaayad aan lahayn gluten-ku-haboon oo loogu talagalay badmaaxyada iyo kuwa leh macaamil la'aanta gluten ama qof kasta oo isku dayaya in uu yareeyo tirada gluten ee ay cunaan.
Inkasta oo kijada American-ka iyo cuntooyinka aan lahayn gluten-free-ka ay bilaw u yihiin inay ogaadaan teff, waxa ay ahayd caan ka ah quraacda Itoobiyaanka ee jiilalka. Haddii aad marwalba cuntid makhaayad Itoobiyaan ah, waxaa suuragal ah in laguu adeegsado jilicsan, jilicsan iyo santuuq la midka ah oo lagu magacaabo "injera", oo laga sameeyay teff.
Eeg sidoo kale: 8 miro caafimaad leh oo dhan waa inaad isku daydaa
Soo iibso teff
Teff waa sahlan tahay in la ogaado, tan iyo midabka mugdiga ah iyo cabbirka yaryar ayaa ka dhigaya mid ka mid ah miro kale. Waxay u egtahay mid la mid ah sida miraha yaryar oo yar yar ama miraha digirta madow marka ay dhan tahay. Waxaad ka heli kartaa tafaasta midhaha kale oo dhan (mararka qaarkood rashiinka dubista ama maadada kale ee quraacda sida badarka laga iibsado) cuntooyinka dabiiciga ah badankood iyo dukaamada raashinka qaar leh. Si ka duwan noocyada kale ee macdanta, aad uma badna inaad ku aragto teff ee tuubooyinka bulkada ee dukaamada dabiiciga ah.
Goob kasta oo dhan waxay leedahay wax yar oo wax karinta wax lagu kariyo, teff ma aha mid ka reeban.
Teff waxaa loo diyaarin karaa sida ugu yar hal koob oo biyo ah koob kasta oo kubad ah iyo ilaa 4 koob oo biyo ah koob kasta oo teff. Haddii aanad raadineynin mashiinka jilicsan, joodariga la midka ah, dadka badankood waxay ku talinayaan inay karsadaan cunto ku saabsan qiyaas ahaan 1 3/4 koob oo biyo ah koob kasta oo qallalan oo qallalan . Haddii aad rabto wax aad u badan sida jilicsan quraacda leh oo quraac leh, waxaad u baahan doontaa inaad ku darto biyo badan si aad u hesho maaddo jilicsan.
Si aad u karsatid teff, isku kari ilaa 20 daqiiqo, ka dibna ku riix fargeeto ah, sida aad u rabto quinoa ama couscous.
Hal koob oo tire ah oo qoyan oo qallalan oo qallalan ayaa soo saaraya ku dhowaad saddex koob oo ah marka la kariyey, sida ugu habboon u qorshee!
Ma caafimaad qabaa? Waa maxay qiimaha nafaqada ee teff?
Inkasta oo quinoa si fiican ay u cunaan vegetarians iyo vegans ee ay ka kooban tahay borotiinka sare, vegetarians iyo vegans ayaa jacayl u noqon kara tifaftirka heerka calcium ee sarreeya. Hal koob oo karsan oo la kariyey ayaa ku jirta 123 mg oo kalsiyum ah.
Sida laga soo xigtay CalorieCount, 1/4 koob oo qalalan oo qallalan (qiyaastii 3/4 koob oo la kariyey), waxay leedahay 180 kalori oo keliya iyo 1 garaam oo baruur ah, taasoo ka dhigaysa cunto yar oo calorie ah iyo cunto aan cunto lahayn.
Cunnooyinka isticmaalka teff
Diyaar ma u tahay inaad isku daydo inaad isku daydo jikadaada? Halkan waxaa ku yaal cuntooyin badan oo khudradeed iyo vegan adigoo isticmaalaya teff:
Qodobka ugu sarreeya ee "cheesy teff teff polenta"
Dhallaanka Iskootiga ee Iskotishka leh teff
Vegan canjeelada muuska muuska
Laaseenada cas iyo qumbaha feeraha leh tuf
Qodobbada Homemade Pizza Cuntada iyo Talooyinka sare
Khamriga Porker ee Rib
Sida loo Isticmaalo Shaaha Chaaha ee Gurigaaga
Qaadada Kibada leh Qolfaha-Style Mawduuca
Creamy Bourbon Digaag leh Mushrooms
Naasaha Duufan ee Tropical Manhajka
Noocyada Bariiska Talyaaniga ah ee Bariiska Bariiska leh oo leh Basil Recipe
Cherry Garcia Dukumiintiyadu waa kalluunka
10 Hababka loo Isticmaalo Suugaanta Chimichurri
Qaboojiyaha qaboojiyaha leh dharka Mimosa
Chocolat Chau Recipe
Cabbitaanka jiilaalka Cocktails
Foornada kuleylka ah ee kuleylka leh ee saladhda xagaaga
Cuntada Cobbler Apple Classic
Sidee loo sameeyaa barbaro la isku-barbardhigo digaagaha digaaga qafiifka ah
Talooyin iyo Caqabado ku Saabsan Dhalmada Dhal Puri
Qufac Coconut Potato Fudge
Cuntooyinka la kariyey ee Sukkot iyo Simchat Torah